Banyere Anyị - Hangzhou Copel Chemical Co., Ltd.
Hangzhou Copel Chemical Co., Ltd. dị na obodo mara mma, Hangzhou City. Hangzhou Copel Chemical Co., Ltd. (nke a na-akpọ "Copel") bụ onye na-azụ ahịa ọkachamara na API, ndị na-ahụ maka ọgwụ, ndị na-eri nri & ndị na-eri nri na Veterinary na China. Ọ pụtara mgbe, Anyị na-emesi ike na anyị siri ike na nrụpụta nkwekọrịta.
Copel azụlitewo nkwado siri ike na mmekorita ya na ọtụtụ ezigbo ndị nrụpụta na China. Karịsịa anyị nwere ezigbo isi mmalite.
Copel ebubata ụdị ngwaahịa dị iche iche na ahịa dị iche iche. Anyị na ngwaahịa na ọkachamara ọrụ na-ukwuu afọ ojuju site ahịa.